Mujaahidiinta Alshabaab Oo Sheegtay Mas’uuliyada Dilka Taliyaha Nabadsugida Sh/dhexe. – Calamada.com
Mujaahidiinta Alshabaab Oo Sheegtay Mas’uuliyada Dilka Taliyaha Nabadsugida Sh/dhexe.
calamada June 22, 2016 1 min read
Taliyihii hayâ€™adda Sirdoonka ee kooxda ridada Soomaaliya ugu magacownaa Wilaayada Sh/dhexe Cabdi Wali Ibraahim Muxamed ayaa caawa lagu iqtiyaalay magaalada Jowhar xarunta Wilaayada Sh/dhexe, Iyadoo sidoo kalena la dhaawacay ku xigeenkiisii oo magaciisa lagu soo gaabiyey Muuse Afeey.
Xarakada Mujaahidiinta AlShabaab ayaa sheegatay Masâ€™uuliyada weerarka lagu iqtiyaalay murtadkan oo kooxda ridada Somaliya ugu magacownaa Taliyaha Amniga ee Sh/dhexe.
Sarkaal ka tirsan Mujaahidiinta ayaa noo xaqiijiyey in weerarka lagu dilay Sarkaalkaas uu fuliyey Mujaahid ka tirsanaa guutada Iqtiyaalaadka ee Mujaahidiinta, islamarkaana uu si nabadgalyo ah ku soo noqday ka dib markii uu howlgalkaasi fuliyey.
Howlgalkan oo ahaa mid qorsheysan ayaa sidoo kale waxaa si halis ah ugu dhaawacmay Muuse Afeey oo ahaa ku xigeenka Murtadka la khaarijiyey, Waxaana lagu soo waramayaa in xaaladiisu ay halis tahay.
Sidoo kale ilaa dhowr Askari oo ka mid ahaa ilaaladii taliyaha ayaa iyagana halkaas ku dhaawacmay weerarka sida ay noo xaqiijiyeen ilo wareedyo dhanka cadowga ah.
Howlgalka caawa lagu iqtiyaalay Taliyihii hayâ€™adda Ashahaada la dirirka Murtadiinta u qaabilsanaa Wilaayada Sh/dhexe ayaa qeyb ka ah silsilado camaliyaad qorsheysan ah oo Mujaahidiintu ay ku ugaarsadaan masâ€™uuliyiinta hayâ€™adaha jawaasiista ee kooxda ridada Soomaaliya.
Previous: Dhageyso Barnaamijka Faafreebka Wararka Andalus 17-09-1437 Hijri.
Next: Dhageyso Warka Subax Ee Andalus 17-09-1437 Hijri.
1 thought on “Mujaahidiinta Alshabaab Oo Sheegtay Mas’uuliyada Dilka Taliyaha Nabadsugida Sh/dhexe.”
Murtad waa ladilaa
Muftigoodi xumaa iyo
Sandiiq waa la miraa
Inta maashka la qaadaa
Musbaar looga jaraa
Malas weeye ansaartiye
Macaad dood ha dhagaysan
Intaad miino u qoosshoo
Maqal yaacday sideed
Murtad waa la dilaa
Madaxaa la guraa
Muslim maahan nijaas kuye
maashka qaada kurtooda